June 17, 2021 - Piti
Online ကနေ ပစ္စည်း တွေအပြိုင်အဆိုင် ရောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆိုင်ကို တခြားဆိုင်နဲ့ ကွဲပြားအောင်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ် ... ဒီအချိန်မှာ customers loyalty ကိုတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ packaging အပိုင်းပါဘဲ ... တချို့ကတော့ packaging မှာ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့သုံးကြတယ်... တကယ်တော့ packaging ကြောင့် customer ရဲ့ဆိုင်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကိုကွာခြားစေပါတယ် .. packaging ကိုကောင်းမွန်စွာ ထုတ်ပိုးခြင်းက ကိုယ်ရဲ့ brand ကို customers တွေပိုစိတ်ဝင်စား သတိထားမိစေပါတယ် ...packaging မှာ investment လုပ်ပြီး marketing လုပ်သင့်တဲ့ idea တွေကတော့ . . . FB မှာ share ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါ ။ ကျွန်တော်တို့တွေက
Customersတွေ ဆိုင်ကိုပြန်လာချင်စိတ်ဖြစ်အောင် Loyalty Points တွေနဲ့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ ?
Loyalty ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက် အခြေအနေတစ်ခုပါ... အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဆိုင်ကို customers တွေပြန်လာဝယ်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူနိုင်တာဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရလဒ်ကောင်းပါ.. ဒီစိတ်ခံစားချက် ဖြစ်တည်ဖို့အတွက်..customers တွေစျေးလာဝယ်တဲ့အခါ points တွေပေးပြီး အစပျိုးလို့ရပါတယ် ။ Customers တွေအနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကို ရောက်အောင် points တွေစုရတာကလည်း စျေးပြန်လာဝယ်ဖို့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် .. points တွေစုပြီးပြည့်သွားလို့ reward ထုတ်ယူလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ပျော်ရွှင်မှု ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်... points တွေသက်တမ်း ကုန်သွားရင်တော့ ဆုံးရူံးတဲ့ ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် .. ဒီပျော်ရွှင်မှု ဆုံးရှုံးမှု စိတ်ခံစားချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး points တွေနဲ့ customers တွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုပါတယ် .. ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုရင်တော့ Rewards တွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ် လစဉ် points
ကျွန်တော်တို့ Piti MCommerce အသုံးပြုနေတဲ့ ဆိုင်ရှင် တွေ အနေနဲ့ ပြောပြစရာမလိုဘဲသိနိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကတော့ ... customers တွေ MCommerce ကနေကိုယ်တိုင် checkout လုပ်ပြီး ...ပထမဆုံး အမှာစာ ဝင်လာတဲ့အခါပါဘဲ ။ ါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာတင်ရပ်နေလို့မရပါဘူး ... ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့အဓိက လုပ်ဆောင် ရမှာက first time customer ကို repeated customer အနေနဲပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ပါဘဲ...customers တွေ ဆိုင်ကိုပြန်လာဝယ်ချင်အောင် အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေပေးနိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ် ....ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်မှာရှိတဲ့ products တွေ services တွေထက်ကျော်ပြီး .. ဆိုင်နဲ့ စျေးဝယ်သူကြားမှာ ရေရှည် ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ customer ဆိုတာ ..